आफ्नै आमाले गरीन् २४ वर्षीया छोरीको हत्या, यस्तो छ वास्तविक रहस्य!
माघ २८, २०७४ बिगुल न्यूज- SG
एजेन्सी, एक महिलाले आफ्नै सौतेनी छोरीको हत्या गरेकी छिन्। यो घटना भारतस्थित उत्तराखण्डको अस्थायी राजधानी देहरादूनमा भएको हो। मिनु देहरादून नाम गरेकी सौतेनी आमाले आफ्नै २४ वर्षीय सौतेनी छोरी प्राप्ती सिंहको हत्या गरेकी छिन् । मृतक प्रप्तिको बुवा अजित सिंहको २०१६ सालमा नै मृत्यु भएको थियो। उनको बाबुले सबै सम्पति उनकै नाममा राखेका थिए। प्राप्तिको नाममा रहेको सम्पतिमाथि सौतेनी आमाको नजर लागेको थियो। मिनु र प्राप्तिको सधै सम्पतिको निहुमा झगडा हुने प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। प्राप्ति अजितको एकमात्रै सन्तान हो ।
अजितको मृत्युपछि प्राप्तिको नाममा रहेको घर बेच्न सौतेनी आमाले दबाब दिइरहेकी थिइन्। लामो समयदेखि उनले आमाको कुरालाई अस्वीकार गर्दै आएकी थिइन्। तर एकदिन सौतेनी आमाले उनि सुतिरहेको अवस्थामा धारिलो हतियार प्रहार गरी दुई टुक्रा बनाएर शवलाई स्टोर रुममा लुकाएर राखिन् । छोरीको हत्या गरेर उनि आफै प्रहरी चौकीमा छोरी हराएको सूचना दिन पुगेकी थिइन्। अन्तत: प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनले नै प्राप्तिको हत्या गरेको रहस्य पट्ट लागेको छ।
प्रकाशित : आइतबार, माघ २८, २०७४१५:२६
लिंग बढाउन गरिने विभिन्न सर्जरीले दिलाउँछ यस्ता पिडा ! के भन्छन् अनुसन्धानकर्ताहरु ?
मृत्यु भैसकेका बृद्धलाई युवतीले यसरि बचाईन् ! हेर्नुहोस् भिडियो सहित !
विद्यार्थीलाई भटाभट कसले पठाउँदैछ सेक्स टोय ?
१५ सय वर्ष पुरानो चीनको प्राचीन मन्दिर काठको टेकाको भरमा…
कहाँ र कहिले बन्यो आइसक्रिम ? यस्तो छ आइसक्रिमको रामकहानी